Barakac ka Bilowday Degmooyinka Buula Mareer iyo Baraawe. | Barakac ka Bilowday Degmooyinka Buula Mareer iyo Baraawe. – Latest News
« Deg Deg: Dhageyso Dagaal Xoogan oo Saaka ka biloowday Shabellaha Hoose
Xaalada Saaxdheer oo maanta aad u kacsan iyo Saan saan colaadeed oo halkaasi ka… »
Barakac ka Bilowday Degmooyinka Buula Mareer iyo Baraawe.
Published August 30, 2014 | By gtimes
Wararka ka imaanaya degmooyinka Buula mareer iyo Baraawe oo ka mid ah gobalka Sh/hoose ayaa waxay sheegayaan inuu halkaasi Barakac xoogan ka bilowday ka dib Markii ciidamada dowlada iyo Kuwa Amison ay halkaasi ku dhaqaaqeen.
Wararka ayaa sheegay in shacabka degaanadaasi ku dhaqan ay bilaabeen in ay isaga qaxaan ka dib cabsi xoogan oo ay dagaaladaasi ka muujiyeen iyagoo u cararay degaanada kale ee gobalkaasi ka Tirsan.
Ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ayaa saakay guluf ballaaran ku qaaday Buulo Mareer, iyadoo deegaankan uu ilaa 80-KM u jiro degmada muhiimka ah ee Baraawe, halkaasoo ay ku xoogan yihiin Al-Shabaab.
Wararka aya waxay intaasi ku darayaan in ciidamada huwan ee is kaashanaya ay kaabiga ku haayaan degaanka Buula mareer halkaasi oo ay in muda ah ku sugnaayeen ciidamada Kooxda Al-shabaab.
Dhinaca kale degmada Baraawe ee xeebta ku taal ayaa iyana barakac uu ka socdaa, iyadoo ciidamada huwantu ay qorsheynayaan marka ay qabsadaan Buulo Mareer ay u gudbaan, kana weerareen dhowr jiho.
Dowladda Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday howl gal ay ugu magac dartay Badweynta Hindiya, kaasoo ay sheegtay in qorshihiisa yahay sidii Al-Shabaab looga saari lahaa deegaanada ay kaga sugan yihiin dalka.
Hase ahaatee ma jiro ilaa iyo hada wax dagaal Fool ka fool ah oo dhinacayada halkaasi isu hub Aruursanaya dhex maray balse cabsida xoogan ay jirto wixii warar ah eek u soo kordha waan idiin soo gudbin doonaa